Muuri News Network » XOG: Shariif Xasan oo ka shalaayay shirkii Imaaraadka & Xildhibaano xilka ka qaadi rabay oo
XOG: Shariif Xasan oo ka shalaayay shirkii Imaaraadka & Xildhibaano xilka ka qaadi rabay oo
Xildhibaanada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheikh Aadan ku cadaadinaya inuu ka tanaasulo Mucaaradnimada uu ku hayo Dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo.
Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ka qeyb galay shir Xildhibaanada ee Mucaaradka ku ah Dowladda iyo Siyaasiyiin caan ah oo la yaqaano ay ku yeesheen Imaaraadka Carabta,kaasi oo dabin loogu dhigayay Dowladda fadhigeeda uu yahay Muqdisho.
Tiro Xildhibaano ah oo lagu qiyaasay 50-meeyo ayaa shariif Xasan ku cadaadinaya inuu joojiyo Mucaaradnimada uu ku haayo Dowladda iyo dhagarta uu u maleegayo haddii kale isaga xilka ka qaadayaan.
Kulan ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa lagu heshiiyay Xildhibaano dhowr ah oo ku kacsan maamulka iyo Shariif Xasan,kuwaasi oo Heshiisyo kala saxiixday.
Mid ka mid ah Xildhibaanada oo magaciisa diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaa inoo sheegay in Shariif Xasan uu qirtay in Mucaarad uu ku ahaa Dowladda,balse hadda wixii ka danbeeyo uu taageeri doono,islamarkaana ka tanaasulayo howlaha faraha uu kula jiro.
Xildhibaano iyo Siyaasiyiin uu ku jiro madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa dhawaan shir ku yeeshay Imaaraadka Carabta,kaasi oo looga soo horjeeday Hogaanka Dowladda Soomaaliya.